Heshiiska siyaasadda soo galootiga ee ururka EU - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heshiiska siyaasadda soo galootiga ee ururka EU
La daabacay fredag 5 april 2013 kl 16.54
Kuleeylaha oo go'aan laga gaari doono siyaasadda soo-galootiga EU-da
Siyaasad ey u mideeysan yihiin waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub EU oo la xiriirta arrimmaha soo-galootiga ayaa horay loogu tallaabsadey. Siyaasaddan cusub ee soo-galootiga ayaa qeexeeysa kolka lagu tallaabsado in qaxootigu ey ku helaan qaabilaad isku mid ah dhammaan waddammada xubnaha ka ah EU-da.
La taliyaha wasiirka socdaalka ee dhanka qaxootiga Andreas Ollinen, ayaa sheegay in tallaabasaadi aanay wax sidaa u weyn ka bedeli doonin siyaasadda soo-galootiga ee dalkan Iswiidhen.
Hase-yeeshee ey dawladda dalku ku rajo weeyn tahay in tallaabo loo qaado dhanka siyaasad loo mideey-san yahay ee soo-galootigu hor-seeddo in si cadaalada ah loo qeeybsado tirada qaxootiga qaaradda u soo socdaala, sida uu sheegay:
- Qaaradda Yurub waxaan maanta ku jirnaa xaaladda ah in shan ka mid ah waddammada xubnaha ka ah ururka Miodwga Yurub ey qaabilaan 70% dadyoowga qaxa ku yimaada. Middaasi oo macnaheedu tahay in 22 waddanka kale ee xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub ey qaabilaan 30%. Waana mid la rajeeyneyo in haddii la dhiiri-geliyo ey dhammaan waddammada xubnaha ka EU-du dusha u ritaan masuuliyaddooda.
Xaaladda in si cadaalada ah ey waddammadu ugu qeeybsadaan tirada soo-galootiga ayuu marar badan carabka ku dhuftay wasiirka socdaalka ee dalakn Iswiidhen Tobias Billström. Isagoona sheegay in haddii waddammada kale ee xubnaha ka ah EU-du ey dusha u ridan lahaayeen masuuliyaddooda ey sabab u noqon lahayd iney dalkan u soo qaxaan tiro ka yar midda iminka, hase yeeshee uu ka gaabsaday Andreas Ollinen in middaasi aas aas u tahay siyaasadda dawladda:
- Lama oran karo in dalka Iswiidhen qabto hoowlo fara badan, waxaase la oran karaa in waddammada kale aaney qaban hoowlihii la gudboonaa.
Ugu horeeyn sannadkii 1999 ayuu ahaa kolkii ey waddammada EU-du ku dhawaaqeen markii ugu horeeysay damaca siyaasad laga mideey-san yahay ee dhanka soo-galootiga, waana mid in muddo ah soo jiitameeysay. Waxaase iminka lagu guuleeystey in lagu midoobo shan qodob ee hagaya arrimmaha ey ka mid yihiin xuquuqda deggenaanshaha, caafimaadka iyo sidoo kale habka qaabilaadda soo-galootiga ee waddammada xubnaha ka ah EU-da. Cecilia Malmström (FP), oo hoggaanka sare ee ururka eu-da u qaabil-san arrimmaha soo-galootiga, ayaa sheegtay in is-bedelka siyaasadda soo-galootigu siinayo suurtagal sidii ey ku heli lahaayeen ammaan dadka kuwooda ugu baahida badan. Waana mid ey maanta ku kala duwan yihiin waddammada xubnaha ka ah eu-da. Iyo sidoo kale in ururka eu-du yeesho qalabkii uu ku hoowl-geli lahaa si loo hir-geliyo siyaasadda soo-galootiga ee waddammada xubnaha ka ah.
Hase yeeshee Maite Zamacona Aguirre, kana mid ah saraakiisha ka hoowl-gasha ururka laan-kheeyrta cas laantiisa soo-galootiga aanay sidaa ugu qanac-sanayn amuurtaa, inkasta oo ay dhanka kale soo dhoweeynayso siyaasddaa. Hab aan wanaag-sanayn ayaa maanta looga qaabilaa waddammo ka mid ah ururka eu-da, sida ay sheegtay, waxaana jirta cabsi laga qabo iney tallaabooyinkaasi halkaa ka sii socdaan mustaqbalka. Haddii ey ey tiro ka badan ey waddammadaa ka dalbadaan soo-galooti-nimo ma ahan macnaheedu in xaaladdii qaabilaad ee dalalkaasi hagaatay, marka laga yimaado waraaqaha waxa ku qoran, sida ay qabto:
- Weli waxaa jirta halis looga cabsi qabo middaa. Middaasina ugu wcan tahay inay sidaa horey u ahaan jirtay, hase yeeshee aan aragno halka xaaladi ku dambeeyso. Waa muhiim in si hab-sami ah looga howl-galo waddammadaa, balse waxaa muuqda halis ah in caqabaduhu halkooda ka sii socdaan.
Go'aanka kama dambeeysta ah ee siyaasadda soo-galootiga ayuu baarlamanka eu-du qalinka ku duugi doonaa ugu dambeeyn kuleeylaha foodda innagu soo haya "looba joogee, ayay xaaladdu taagan tahay".
Heshiiska EU-da ma noqon doonaa mid hagaajiya xaaladda qaxootiga?